2 PITA 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2PI 2)
Ma nꞌihi otu ha si ebi ndụ ha ọtụtụ mmadụ ga-ekwu okwu megide ụzọ nke eziokwu ahụ.
Ndị nkuzi ụgha a ga-esite nꞌakpịrị ego ha nwere gwa unu ihe ọ bụla, nke ga-eme ka ego unu bata ha nꞌaka. Ma ha bụ rị ndị Chineke mara ikpe kemgbe oge gara aga ọge ịla nꞌiyi ha na-abịa nso.
Chineke emereghị ndị ụwa mbụ ebere. O mere ka mmiri zoo, kpuchie ụwa ahụ jupụtara na ndị na-amaghị Chineke, ka ọ bụrụ nanị Noa onye gwara ndị ọgbọ ya okwu banyere omume Chineke ka o chebere ndụ, ya na mmadụ asaa ọzọ.
Ọzọ, Chineke mara obodo Sodọm na Gomora ikpe, werekwa ọkụ rechapụ obodo ahụ, ya na ndị nile bi nꞌime ya, ime ka nke a bụrụ ihe ịma atụ nye ndị na-amaghị Chineke ihe ga-abụ ọnọdụ ha mgbe Chineke ga-ekpe ha ikpe.
Ha esitela nꞌezi ụzọ ahụ jehie, bụrụ ndị furu efu dị ka Belam, nwa Beoa onye chọrọ ime ihe ọjọọ nꞌihi ego ọ maara na ọ ga-enweta.
Ma e mere ka Belam si nꞌụzọ ọjọọ dị otu a pụta, mgbe e mere ka inyinya ibu ya jiri olu mmadụ gwa ya okwu, baara ya mba.
Ọ gaara akara onye ahụ mma ma ọ bụrụ na o nweghị oge o ji mata ihe banyere Kraịst na ụzọ ya, karịa na ọ matara ya, mụta ihe banyere ya, mesịa gbaketa iwu ahụ nile e nyere ya azụ.
Ọ bụrụ na ihe dị otu a emee, a ga-eji omume onye ahụ tụnyere ilu ndị a nke kwuru sị, “Nkịta gbọchaa agbọ, ọ laghachi rachaa ihe ọ gbọrọ.” “A sachaa ezi ahụ, ya eburu onwe ya tụnye nꞌunyi.”
2 PITA 2:2
2 PITA 2:3
2 PITA 2:5
2 PITA 2:6
2 PITA 2:15
2 PITA 2:16
2 PITA 2:19
2 PITA 2:21
2 PITA 2:22
2 PITA 1 / 2PI 1
2 PITA 2 / 2PI 2
2 PITA 3 / 2PI 3